စတင်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများအတွက် အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများ | KyoPay
၁။ ဖြန့်ကျက်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပြုလုပ်ပါ
ဖြန့်ကျက်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုသည်ကို မြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် “ကြက်ဥတွေအများကြီးကို ခြင်းတောင်းတစ်လုံးထဲ ထည့်မထားပါနဲ့” ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့တင်စားပြောချင်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ရာတွင် အန္တရာယ်နည်းစေသော နည်းလမ်းမှာ တစ်နေရာထဲတွင် စုပုံကာ ရင်းနှီးမြုှပ်နှံမှု မလုပ်ခြင်းပါပဲ။ သင်တကယ်လို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တစ်ခုခုမှာ အရှုံးပေါ်ခဲ့ရင်တောင် တစ်ခြားနေရာမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ထားတဲ့ အမြတ်စွန်းတွေကနေ သင့် ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ပြန်ကာပေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ ပြောတိုင်း မယုံပါနဲ့
ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်အောင်နေထိုင်နည်းတွေကို လမ်းညွှန်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်က အမြဲ သုန်မှုန်နေမယ်ဆိုရင်သင်သူ့ကို ယုံကြည်သင့်ပါသလား? ကိုယ်ခံပညာတွေကို သင်ကြားနေ ပေမယ့်တိုက်ခိုက်မှုတိုင်း ရှုံးနိမ့်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို သင်ယုံကြည်သင့်ပါသလား ? သင့် ပတ်ဝန်းကျင်က အောင်မြင်နေတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဆီက စကားကိုသာ နားထောင်လိုက်ပြီး ကျန်တဲ့ သူတွေကို လျစ်လျူရှုလိုက်ပါ။
၃။ နိုင်သလောက်ပဲ သယ်ပါ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ဖို့ ပိုက်ဆံမချေးပါနဲ့။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက ကံမကောင်းစွာနဲ့ အရှုံးပေါ်ရင် အမြတ်မရတဲ့ အပြင် ရင်းနှီးဖို့ ချေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ အကြွေးတောင် တင်နေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လို ပိုက်ဆံတွေ ချေးငှားမယ့်အစား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ရာတွင် ရောက်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်တွေသာ အာရုံစိုက်ကာ ရသမျှ ဝင်ငွေတွေကို ခြိုးခြံချွေတာပြီး စုဆောင်းလိုက်ပါ။
၄။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ပါ
အခက်ခဲဆုံး အရာတစ်ခုကိုပြောပါဆိုလျှင်သင် ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို သင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ဖို့ပါပဲ။ တစ်ချို့တွေက မှန်တယ် တစ်ချို့တွေက မှားတယ်ဆိုပြီး သင်အမြဲတွေးနေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အစား ရင်းနှီးမြှုပ်နံမှုနဲ့ပတ်သက်တာကို ပိုမိုလေ့လာပြီး သင့်ကိုယ်သင် ပိုမို ယုံကြည်လိုက်ပါ။ အချိန်အတိုင်းတာ တစ်ခုအတွင်း ဗဟုသုတတွေကို စုဆောင်း ၊ မိမိကိုယ်တိုင်သာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချပြီး လူအများတောင်းတ နေတဲ့ သရဖူကို မေ့ပြီး အောင်မြင်သူတစ်ယောက်အဖြစ်သာ ရပ်တည်လိုက်ပါ။
၅။ KyoPay တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါ
KyoPay ဆိုတာကတော့ လျှင်မြန်လွယ်ကူပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်စေရန်အတွက် Receivable Invoices များကို အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံသို့ ရောင်းချနိုင်အောင်စီ စဉ်ထားသောအွန်လိုင်း ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
KyoPay မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ခြင်းဖြင့်ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ -
(က) တိုင်းတာနိုင်သော အကျိုးအမြတ်
တစ်နှစ်အတွင်း ၁၅% မှ ၂၀% အထိ အကျိုးအမြတ်ပြန် ရရှိမှု
ရရှိလာသော အမြတ်အစွန်းများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီများမှဖြစ်ခြင်း
(ဂ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းအသစ်
Risk များကို တိုင်းတာနိုင်သော အချိန်တို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းသစ်
KyoPay တွင် ရင်းနီးမြှပ်နှံမှုများအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.kyopay.com.mm ကို ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်သလို info@kyopay.com.mm / 09-898832995 ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။